Xiaomi Mi A3 wuxuu muujinayaa qeexitaankiisa koowaad | Androidsis
Dhowr usbuuc ka hor ayaa la ogaaday in Xiaomi mar hore ayey ka shaqeysay barnaamijka 'Xiaomi Mi A3'. Waa jiilkii saddexaad ee taleefanno ka soo baxa nooca Shiinaha si ay ula yimaadaan Android One oo ah nidaamka qalliinka. Qaabkan cusub, ama moodooyinka, ayaa laga bilaabi doonaa dukaamada bartamaha sanadka ama xagaaga oo dhan, haddii ay raacaan taariikho la mid ah kuwii sanadkii hore.
Waxay bilaabeen inay na soo gaaraan xogta ugu horreysa ee ku saabsan tan cusub ee Xiaomi Mi A3. Faahfaahinta qaar ee ku saabsan waxa aan ka filan karno kala-soo-ceshigan cusub ee sumadda Shiinaha. Markaa fiiri waxa ay shirkaddu noogu diyaarisay arrintan.
Dareerkii ugu horreeyay ee toddobaadkan ka jiray Xiaomi Mi A3 waa in taleefanku leeyahay shidma faraha wax lagu dhajiyay shaashadda. Tani waa wax aan ku sii aragno suuqa Android, gaar ahaan dhamaadka sare. Laakiin sumadda Shiinaha ayaa sharad ku darsan doonta inay tan ku daraan bartankooda sidoo kale.
Sidoo kale, Waxaa la sheegay in taleefanka uu ku imaan doono kamarad hore oo 32 MP ah. Waxay noqon laheyd dareemayaal awood badan, oo aad ku qaadan karto sawir-qaade aad u wanaagsan taleefankan. Faahfaahinta la helay, darajo ayaa lagu sheegay. Malaha calaamaddu waxay ku sharadaysaa qaanso u dhiganta hal dhibic biyo, aad mooddo maanta.
Faahfaahin dheeraad ah lagama helin Xiaomi Mi A3. Waxaa jira warbaahin ka hadleysa processor-ka uu qaabkani lahaan lahaa. In kasta oo aanay waxba caddayn. Maaddaama qaar ka hadlaan Snapdragon 675 halka kuwa kale ka faalloodaan inuu noqon lahaa Snapdragon 710 midka la doortay. Haatan wax aan xaqiijineyno ma jiraan.
Weli waa inaan sugnaa dhowr bilood illaa iyo inta si rasmi ah loo bilaabayo Xiaomi Mi A3. Malaha xagaaga sidii sanadkii hore waa marka aan helno dhammaan faahfaahinta ku saabsan bartan-dhexe ee astaanta. Waxaa la filayaa in sidii sanadkii hore oo kale, ay la imaan doonto qaab kale oo ka fudud. Laakiin hadda wax macluumaad ah oo ku saabsan tusaalaha kale ma jiro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Faahfaahinta ugu horreysa ee Xiaomi Mi A3 waa la sifeeyaa
Labada dariiqo ee ugu wanaagsan ee looga wareejiyo sawirada moobilkaaga Android-ga ah kombuyutarkaaga
Waxaan horey u haysannay Google Voice Access oo Isbaanish ah